शेयर धितोमा वाणिज्य बैङ्कको रू. ३५ अर्ब लगानी | गृहपृष्ठ
Home लगानी शेयर धितोमा वाणिज्य बैङ्कको रू. ३५ अर्ब लगानी
लगानी 80 views
शेयर धितोमा वाणिज्य बैङ्कको रू. ३५ अर्ब लगानी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो ६ महीनामा वाणिज्य बैङ्कहरूले शेयर धितोमा रू. ३५ अर्ब २१ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो १० दशमलव २१ प्रतिशत बढी हो । गत आवको पुस मसान्तसम्ममा यी बैङ्कले शेयर धितोमा रू. ३२ अर्ब लगानी गरेका थिए । बैङ्कहरूले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखिएका हो । नेपाली धितोपत्र बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सुस्त भइरहेको बेला शेयर धितोमा कर्जा भने बढेको छ । चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि सूचीकृत कम्पनीहरूले जारी गरेको हकप्रद शेयर, एफपीओ तथा नयाँ कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओले बजारमा शेयर आपूर्ति बढेको छ । कम्पनीहरूले जारी गरेको हकप्रद, एफपीओ तथा आईपीओमा आवेदन दिन लगानीकर्ताले शेयर धितोमा कर्जा लिएका छन् । फलस्वरूप शेयर धितोमा कर्जा बढेको हो ।
सो अवधिमा मार्जिन लेण्डिङमा लगानी बढे पनि यो रकम बैङ्कहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करीब २ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । उक्त अवधिमा वाणिज्य बैङ्कको कर्जा तथा सापटी २१ प्रतिशत बढेकोले कुल कर्जामा मार्जिन लेण्डिङको अनुपात कम देखिएको हो । हालको मौद्रिक नीतिअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउँछन् । साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीले सो कर्जा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पुस मसान्तसम्ममा कुल २८ वाणिज्य बैङ्कमध्ये २५ ओटाले मात्रै मार्जिन कर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई र कृषि विकास बैङ्कले भने शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । गत आवको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार माछापुच्छे« बैङ्कले शेयर धितोमा सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यो बैङ्कले यस्तो कर्जा ११ गुणा बढाएर रू. ३८ करोड ४३ लाख पु¥याएको छ । तर, रकमको आधारमा भने सिटिजन्स बैङ्क इण्टरनेशनलले सबैभन्दा धेरै अर्थात् रू. २ अर्ब ९१ करोड मार्जिन लेण्डिङ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १४:०५
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १३:४८
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १३:३४